Olympos Teleferik waxay qaadatay 2015 kun 214 qof sanadkii 426 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaXawaareynta Olympos 2015 214 ayaa 426 ku wareejisay XNUMX
22 / 12 / 2015 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, TELPHER
Xoolaha 200 kun qof ayaa u soo guuray dhinaca ugu sarraysa
Olympos Cable Car 2015 ee 214 kun 426 dadkani waa: Isgaadhsiinta Olympos ee badda ka soo fuulaya oo cirka leh Olympos Teleferik si ay uga qaybgalaan shirkii 2 kun mitir 365 kun oo kun oo qof sannadkii hore inkastoo tirada 2015 kun qof.
2 bin 365 mitir sare oo ka mid ah buuraha Tahtaliif, oo ay soo booqdaan dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah ee ka kala yimid Antalya oo dhan, waxay ku tartamayaan burburkii Olympos iyo Phaselis ee gobolka. 11 muddada bil kasta ee sanadka, 189 kun dadka 806 ayaa booqday dadka Phaselis iyo 180 kun 790, halka shirkii Tahtali ee xaafadda 214 kun 426 ay isla soo booqdeen.
Buuraha Tahtali, oo si weyn uga qayb qaatay horumarinta gobalka, dalxiisayaasha marti galiyay fursad ay ku daawadaan gobolka xagaaga oo ay uga mahadcelinayaan Olympos Cable Car, oo bilaabay dhaqdhaqaaqyadooda 2007, waxay u fiddaa jiilaalka si ay ugu raaxaystaan ​​barafka. caalami ah oo keliya tartanka Turkey ee mootooyinka Enduro adag la Red Sea Bull Si Sky sidoo kale marti Tahtali Mountain on the 'Down Olympos Soda Bike xujaajta ah', 'Wood xamaam Run in Sky ah' sida baaskiil iyo tartamada orodka bungy CATAPULT iyo paragliding waxaa la samayn karaa .
TIMAALKA BULSHADA EE TAHTAL KA HELI KARO CRISIS
Maareeyaha Olympos Teleferik, Maareeyaha Isgaarsiinta iyo Xiriirka Dadweynaha Fatih Koyuncu ayaa sheegay in ay gaareen bartilmaameed sanadkaan tirada dadka soo booqday. Inkasta oo ay jirto dhibaatooyin, 214 kun qof ayaa shirwaynaha, ku nuuxnuuxsaday in Koyuncu Koyuncu, ay rajo ka qabaan sanadka soo socda, ayuu yiri. Koyuncu ayaa sheegay in ay rajeynayaan in kororka tirada dadka soo booqda ee barafka ugu horreeya ee sanadka ah ay tiri, fat ayaa sannadkii hore soo dhaweynay 213 kun qof. Inkastoo marxaladdan ay mar kale dhacdo sanadkan, waxaan dadka ku hareeraysanay 214 shirwaynaha baabuurta. Ma rajeyneyno rajadeena la xariirta dhibaatada sanadka soo socda, si cad, waxaan isku dayi doonaa inaan soo qaadno tirada aan soo gaarnay sanadkan sanadka soo socda. Sannadkan, Suuqa Carbeed waxay faa'iido weyn u tahay ganacsigeenna. Sida aad u arki karto, 3 waxay ahayd booqasho aad u mashquul ah oo marti ku ah xafladaha Axaddii si ay shirwaynaha maalinta ka hor u daad gureeyaan. Iyadoo barafkan, waxaan rajeyneynaa in suuqa gudaha ay si xoog leh u qabato xilliga qaboobaha.
Isla mar ahaantaana, suuqyada yurub ayaa hadda si weyn u degan gobolka Mediterranean waxana aan ku martiqaadnay wakhti ka hor. Tirooyinkeena bartilmaameedka sanadka soo socda waxay ku dhow yihiin 213 kun qof. Waxaan rajeynayaa in aan gaarno dad badan. Sannadkan 4-5, suuqyada kale ayaa la isku dayaa, oo ay ku jiraan suuqyada Yurub, suuqa Carabta, iyo dabcan martida maxalliga ah. Inta lagu jiro xilliga xagaaga, martida deegaanka waxay doorbidaan baabuurka fiilaha gaar ahaan dhamaadka todobaadka. Waxaan sidoo kale abaabulnaa olole loogu talagalay martidayada martida ah inta lagu jiro jiilaalka. Marka la eego qiimaha, labadaba waa macquul, waxaana isku dayi doonaa inaan martida siino aragtida barafka, qorraxda, badda iyo dabeecada oo dhan. Xilligii 2015 ee la soo dhaafay, waxaan inta badan martigelinnay martida Ruushka. Qiyaastii 80 boqolkiiba, waxaan leenahay Ruush, agagaarka suuqa 15, iyo 5 boqolkiiba waxay qaateen martida yurub iyo kuwa maxaliga ah. "
3. Bosphorus Bridge waxay gaadho mitirka 214
Taraam, 40 ayaa kumanaan qof u qaadi doona AOSB
Tareenadu waxay qaadaan hal kun oo qof 104 maalin kasta
SAMULAŞ waxay qaadataa 100 kun qof oo maalin kasta
La xiriir tooska Fatih
Dhibaatada Baaskiilada ee Enduro
Badda Redbull Si Sky
Tahtali orodka Sky
Erdogan oo baaraya isgoyska Brigitte
RayHaber 22.12.2015 Warbixinta Shirka